အစီရင်ခံစာ - ဟောလိဝုဒ်စတူဒီယိုများသည်အာရှရှိဘီလီယံပေါင်းများစွာကို Coronavirus နှင့်ရှုံးနိမ့်မည်
အာရှတိုက် တရုတ်နိုင်ငံ ဂျပန် ေတာင္ကုိးရီးယား
Hollywood studios are reportedly bracing to lose billion of dollars in ticket sales in Asia and other countries due to fears surrounding the coronavirus as major blockbusters including ဝှားမုလန်, Die မရှိအချိန်နှင့် F9 (Fast & Furious 9) are set to roll out around the world.
အမျိုးမျိုး အစီရင်ခံတင်ပြ that major studios are preparing foradip in moviegoing in China, South Korea, Japan, and other countries hit by the coronavirus. But these fears appear so far to be based on speculation since the trade publication cited anonymous “studio executives” who said they are taking “a wait-and-see” approach as the number of hotspots expands.
The indefinite closure of many cinemas around China spells bad news for upcoming releases, like Disney’s ဝှားမုလန်, the live-action movie based on the studio’s 1998 animated feature.
Disney has been betting that ဝှားမုလန်‘s predominantly Chinese cast would help the movie perform well at the Chinese box office. But the $200 million release now faces an uncertain future in China. Disney president of production Sean Bailey recently ကိုပြောသည် ဟောလိဝုဒ်သတင်းထောက် that he’s “looking at it day by day.”
Disney has already canceled plans for ဝှားမုလန်‘s glitzy premiere in China, and Universal has done the same with Die မရှိအချိန်, the latest James Bond movie.
Other Hollywood blockbusters set to open worldwide in the next few months include F9, အမျိုးသမီး 1984 Wonder, and Marvel’s Black ကမုဆိုးမ.
အမျိုးမျိုး reported that many Hollywood studios are in regular contact with the Centers for Disease Control (CDC) and the World Health Organization as “they assess the rapidly changing situation.”
Any negative impact from the coronavirus would only compound Hollywood’s box office woes. The domestic box office ကျဆင်းသွား close to4percent last year as U.S. moviegoers continued to reject the industry’s assembly line of sequels and reboots.
တွစ်တာတွင် David Ng နောက်လိုက်ပါ @HeyItsDavidNg။ အကြံဥာဏ်ရလား။ ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ dng@breitbart.com
ဤဆောင်းပါးသည်မူလကထုတ်ဝေသောခဲ့သည် Breitbart သတင်းများ.
ယခင် Post မှ Brain Freeze: Joe Biden Says He'll 'Appoint' First Black Woman to the 'Senate'
Next Post အာဖရိကကလုပ်တဲ့ဘားဆိုင်တစ်ခုမှာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာမက္ကဆီကိုကိုအမြစ်တွယ်နေကြတယ်
ဆရာဝန်က Hydroxychloroquine လက်မ - နာရီများအတွင်း 'အလွန်အမင်းဖျားနာခြင်း' သည် 'အခြေခံအားဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာကင်း' စေရန်
တွစ်တာ 1247205131860340736 အပေါ် Replyတွစ်တာ 1247205131860340736 အပေါ် Retweetတွစ်တာ 1247205131860340736 အပေါ်လိုပဲ
Coronavirus Shutdown အတွင်းမြင်းဂိမ်းကိုရုပ်မြင်သံကြားမှ NBA, ESPN
တွစ်တာ 1247204994169720833 အပေါ် Replyတွစ်တာ 1247204994169720833 အပေါ် Retweetတွစ်တာ 1247204994169720833 အပေါ်လိုပဲ
ပြည်သူ့ဥယျာဉ်တွင်နယူးယောက်မြို့ Coronavirus သားကောင်များကိုခေတ္တမြှုပ်နှံနိုင်သည်
တွစ်တာ 1247204806000668673 အပေါ် Replyတွစ်တာ 1247204806000668673 အပေါ် Retweetတွစ်တာ 1247204806000668673 အပေါ်လိုပဲ